गोलाप्रथाको गोलचक्करमा अदालतमा नयाँ भाँडभैलो | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
न्यायिक निष्पक्षताका लागि यो एउटा सामान्यतः बाहिर देखाउन सकिने प्रयास त हो तर यसका सबलताभन्दा बढी दुर्बलता छ
२०७८ मंसिर १०, शुक्रबार १८:२५:००
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी यही मंसिर १५ गतेबाट पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा अपनाउने निर्णय फुलकोर्टले गरेको छ । न्यायिक निष्पक्षताका लागि यो एउटा सामान्यतः बाहिर देखाउन सकिने प्रयास त हो तर यसका सबलताभन्दा बढी दुर्बलता छन् । यसले न्यायिक सुव्यवस्थाभन्दा बढी भाँडभैलो सिर्जना गर्ने जोखिम देखिएको छ ।
जिल्ला अदालतहरुमा दर्ताकै समयदेखि जुन मुद्दा जुन फाँटमा दर्ता हुन्छ, छिनोफानो नहुँदासम्म त्यो एउटै इजलासले हेर्छ । यसो गर्दा न्यायमा छरितोपन आएको छ । अघिल्लोप्लट सुनेको न्यायाधीशले नै अर्कोपल्ट त्यस मुद्दाका अंग–उपांग बुझेर अगाडि बढाउन सक्छ । नभए हरेकपल्ट सुरुबाटै मुद्दा हेरिनुपर्ने हुन्छ । गोलाप्रथा अपनाउँदा अब यही कारण मुद्दा कहिल्यै नटुंगिने, समय लाग्ने र न्याय झन् महँगो हुने जोखिम छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौतीले विषय विशेषज्ञताका आधारमा मुद्दा तोक्न नपाइने भएको छ । न्यायाधीशको विज्ञताको अब कुनै अर्थ नहुने भएको छ । वाणिज्यको ज्ञाताले फौजदारी मुद्दा पनि हेर्नुपर्नेछ । फौजदारीको विज्ञले अंशबण्डामा पनि उत्तिकै दख्खल देखाउनुपर्नेछ । यसरी सर्वज्ञानी न्यायाधीशको अपेक्षा कति सम्भव छ ? त्यो समयले नै देखाउला ।
अब सबैभन्दा ठूलो भाँडभैलो त हरेकपटक नयाँ न्यायाधीश र नयाँ इजलासमा मुद्दा परेमा हुनेवाला छ । सामान्यतः सर्वोच्चमा संयुक्त इजलासमा मुद्दा हेरिन्छ । दुईमध्ये एक न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने हुनेबित्तिकै एउटा मुद्दाको सुनुवाइ तीन–चार महिना पर धकेलिनेछ । अर्कोपल्ट पनि उही न्यायाधीशको इजलासमा परे के गर्ने ? त्यो अर्को पक्ष छ । गोला प्रथाले हेर्न नमिल्ने मुद्दा वा विज्ञता भएका न्यायाधीशलाई चिन्दैन । कम्प्युटरबाट स्वचालित प्रणाली अपनाउँदा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशलाई नपार्ने भन्ने पहिला नै जनाउन सकिन्छ । तर, गोला प्रथाबाट त्यो सुविधा छैन ।
हेर्दाहेर्दैका मुद्दामा समेत इजलास र न्यायाधीश परिवर्तन हुने भएकाले सुनुवाइमा थप भाँडभैलो हुनेछ । यसअघि निर्णय सुनाउने दिन तोकिइसकेका मुद्दामा समेत फेरि आदेश गरेर सुरुको चरणमा फर्काउने र पक्षहरुलाई दुःख दिने गरिएको जगजाहेर छ । अब त उही इजलासमा नपर्ने सम्भावना पनि भएकाले कुनै न्यायाधीशका निम्ति अन्धाले हात्ती छामेजस्तो हुन सक्छ । पहिलो सुनुवाइमै निर्णय दिनुपर्दा कस्तो न्याय वा फैसला आउला ? निर्णय सुनाउने मिति तोकिसकेर फेरि झुलाउने हो भने अदालत न्याय दिने ठाउँ हुन्छ कि दुःख दिने ?
वास्तवमा यो स्वचालित वा गोलाप्रथा प्रणाली अविश्वास र अक्षमताको पुञ्ज हो । प्रधानन्यायाधीशहरुमाथि त योभन्दा ठूलो व्यंग्य अरु हुनै सक्दैन । समाजका बदमास व्यक्ति नै प्रधानन्यायाधीश बन्छन् र उनले गर्ने काम निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने सन्देश यसले सधैँभर प्रवाह गरिरहनेछ । यस्तै हामीसँग कुनै योग्यता प्रणाली छैन, वस्तुगत मापनका आधार पनि छैनन् । त्यसैले त्रिशूल कि गाई भनेर हामी साइत निकाल्छौँ भनेर संसारलाई देखाउँदै छौँ । यो वास्ववमा हामी सबैका निम्ति लज्जाको विषय हो । कसको लहड र भाउँतामा लागेर यस्ता योजना आउँछन् र लागू हुन्छन् ?
एकजना व्यक्तिलाई हेरी नियमावली नै परिवर्तन गर्ने हो र प्रधानन्यायाधीशजस्तो न्यायिक क्षेत्रका नेताको अधिकार कटौती गर्ने हो भने कसरी न्यायालय चल्छ ? भावी प्रधानन्यायाधीशहरु पनि कुन मनोबलका साथ काम गर्छन् ? अब आन्दोलन र लहडकै भरमा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौतीमा पर्छ भने भोलि कसले निर्भीक निर्णय गर्छ ? उसको अधिकारकै सुरक्षा छैन भने अरुको अधिकारमा कसरी अडिग रहन सक्ला ? यो एकजना प्रधानन्यायाधीशको मात्र कुरा होइन, यो त संस्थाको कुरा हो । के यो संस्थालाई सधैँ आशंकाग्रस्त, कमजोर र निरीह नै बनाइराख्न चाहेका हौँ ? यसबारे कुनै लोकतन्त्रवादी, योग्यतावादीहरु बोल्नुपर्दैन ? के नियतिवाद नै हाम्रो राष्ट्रिय विचारधारा हो ?